एउटा सानो गल्तीले सांसद जोशीकी परी जस्ती नातिनीले संसार छोडेर विदा ! – Wow Sansar
एउटा सानो गल्तीले सांसद जोशीकी परी जस्ती नातिनीले संसार छोडेर विदा !
February 10, 2021 96
जीवनमा मानिसले त्यस्ता गल्तिहरु गर्छन् जसलाई चाहेर पनि कहिल्यै भुल्न सम्भव हुँदैन । त्यस्ता घटनाहरु तपाईंको आँखामा क्षण–क्षणमा दृश्यका रुपमा रहिरहन्छ । यस्तै घटना अहिले बाहिर आएको छ ।
तपाईंले अहिले यो समाचारमा देखि रहनुभएकी बालिका यो संसारमा अब रहिनन् । तिहारको रौनकतामा रमाउँदा–रमाउँदै उनले यो संसार छोडेर सदाका
लागि विदा भएकी छिन् । आफ्ना आमाबाबु, हजुरआमा र हजुरबुवा लगायत सबैलाई छोडेर यो संसारबाट सदाका लागि विदा भएर गएकी छिन् ।
उत्तर प्रदेशको प्रयागराज लोकसभा सीटबाट भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशीको घरमा शोकको पहाड बनेको छ । उनकी छ वर्षीया नातिनी, किआ, तिहारमा राती पटाखा चलाउँदा नराम्ररी घाइते हुन पुगिन् । तर सबैलाई दुःखी बनाउँदै मंगलबार उपचारको क्रममा सबैलाई छोडेर गईन् ।
तिहारको राती किआलाई पटाखाले घाइते बनाएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । त्यहाँ उनको उपचार भइरहेको थियो । तिहारमा सांसदकी बुहारी रिचा छोरी किआसँग पोनाप्पा मार्गमा उनको माइतीघर गएकी थिइन् ।
सभासद् इन्चार्ज अभिषेक शुक्लाका अनुसार घरको छानामा धेरै केटाकेटीहरू खेलिरहेका थिए । त्यस समयमा कसैले पटाका चलायो, ​​जसले किआलाई नराम्ररी घाइते बनायो ।
उनलाई तत्काल अस्पताल लगियो जहाँ डाक्टरहरूले ६० प्रतिशतसम्म क्षति भएको रिपोर्ट दिए र अवस्था चिन्ताजनक भएको बताए । सांसदको एक मात्र छोरो मयंकको २००७ मा विवाह भएको थियो । किआ उनकी एकमात्र छोरी थिइन् ।
केहि दिन अघि मात्रै रीता बहुगुणा जोशीकी बुहारी रिचाको नातिनी किआ कोरोना सकारात्मक रहेको पाइएको थियो । तीनै जनालाई पीजीआई लखनऊबाट मेदान्त दिल्लीमा सारियो जहाँ सांसदका पति पीसी जोशी पहिले नै उपचाररत थिए ।
उनको स्वास्थ्य बिग्रँदा सांसदलाई आईसीयूमा भर्ना गर्नुपरेको हो । १५ सेप्टेम्बरमा, उनी आईसीयूबाट बाहिर आए र अस्पतालमा नै उनको श्रीमानको जन्मदिन मनाईन् ।
उनलाई २१ सेप्टेम्बरमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरियो । त्यस पछि उनलाई दिल्लीको निवासमा अलग राखियो । निको भएपछि प्रयागराज दीपावली मनाउन आएका थिए यो बीचमा कहिल्लै बिर्सन नसक्ने दुर्घटना भयो ।
अब त्यो परिवारका लागि यस वर्षको तिहार कस्तो भयो भनेर हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । समग्रमा तिहार उनीहरुका लागि प्रत्येक वर्ष घच्घच्याउने खालको भइरहनेछ । सामान्य ख्याल नगर्दा परीजस्ती छोरी उनीहरुले गुमाउनुपरेको छ । हामी सबै अभिभावकहरुलाई अनुरोध गर्दछौँ, कृपया आफ्नो बच्चाको विशेष ख्याल गर्नुहोला । तपाईंलाई कहिल्लै पनि थाहा हुँदैन, तपाइले आफ्नो मुटुमा राख्नुभएको सन्तान कुनबेला तपाईंबाट सदाका लागि टाढा भएर सक्छ ।
कतिपय अभिभावकहरुले बच्चालाई ग्याँस चलाउन सिकाउने, कतिपयले राइस कुकरमा खाना पकाउन सिकाइरहनु भएको हुन्छ, कतिपयले विभिन्न करेन्ट प्रवाह हुने खालका उपकरणहरु चलाउन सिकाउनुहुन्छ ।
खेल्दै गर्दा कसैको ध्यान नपुग्दा नदीनालाहरुमा परेर ज्यान गुमाएका बच्चाहरुको संख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ । यदी सानो सानो कुरामा तपाईंले गरेको सानो गल्ति सानो लापरवाही ले तपाईलाई जीवनभर रुवाउने छ । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला***
Prevप्रचण्ड-माधव पक्षको आन्दोलनमा भारतको झण्डा, यस विषयमा तपाईं के भन्नुहुन्छ?
Nextआज २०७७ माघ २९ गते बिहीबारको राशिफल
आइपरे यु, “द्ध त ल”ड्न सकिन्छ, राजनीति त के होर – रवि लामिछाने; (भिडियो सहित)
कुखुराले भरिएको गाडी सडकमा पल्टियो, घाइते चालकलाई बचाउन छोडेर गाउँलेहरु कुखुरा लुट्न थाले
श्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल (6897)
आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! (4018)
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3480)
निर्मलाको ज्या.न लि.ने अ.पराधीको बारेमा यस्तो सूचना प्रहरीलाई आएपछि… (2255)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1497)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1250)
भर्खरै भयो मुटु कापने दु,र्घटना आमा र छोराको घटनास्थलमै मृ,त्यु (1192)
उडान बन्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा (1160)
गगन थापामाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, पक्राउ गर्ने तयारी ? (1140)
कञ्चनपुरकी यी युवतीले फेसबुकबाट केटासँग लब गर्दा काेठामा लगेर घीनलाग्दाे हर्कत गरी बनाईदिए यस्ताे बिजाेग.. (1134)